Shaqada maamul goboleedyada laga rabo, sida uu qabo Farmaajo - BBC News Somali
Shaqada maamul goboleedyada laga rabo, sida uu qabo Farmaajo
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa markii ugu horreysay si adag uga hadlay arrinta ku saabsan khilaafka dhex yaala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Madaxweynaha caadi ahaan aad ayuu uga gaabsan jiray arrimaha waaweyn ee siyaasadda ee dalka ka taagan, gaar ahaan khilaafka hadda jira, wuxuuna kaliya ku xiriiri jiray war saxaafadeed aad looga soo shaqeeyay ereybixintiisa, inta baddana ay ka muuqatay taxadar iyo waanwaan.
Cidna ma aysan mala awaali karin waxa ka guuxaya maskaxda madaxweynaha ka hor hadalkii uu ka jeediyay magaalada Jubba ee dalka Suudaanka Koonfureed.
Shirkii Soomaalida ee Brussels oo furmay
Aragtida Farmaajo ayaa waxaa muuqaal ka duubay qof ka mid ah dadweynihii ka qeybgalay xafladda, muuqaalkaas oo yeeshay saamayn aad u weyn, kuna faafay baraha bulshada.
Dowlad goboleedyo mise dowladdaha Hoose
Ma sida ay madaxda maamul goboleedyada u arkaan, mise sida uu madaxweyne Farmaajo doonayo, midba.
Sida ay marar badan ku celceliyeen, madaxda maamul goboleedyada waxa ay u arkaan in wax kasta oo go'aan siyaasadeed ah oo dalka ka socda laga talogaliyo, lalana qeybsado awoodo, oo ay xitaa ka mid tahay siyaasadda arrimaha dibedda.
"Dowlad goboleedyada waxaa usoo haray in ay adeeggii gaarsiiyaan shacabka, haddii ay tahay waxbarasho, haddii ay tahay caafimaad, haddii ay tahay in ay dadka ka warqabaan, haddii ay tahay in ay ceelal u sameeyaan, haddii ay tahay in ay canshuuraha uruuriyaan" ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu intaas ku daray in nidaamkani uu yahay sida nidaamka federaalka uu uga shaqeeyo dalalka kale ee adduunka.
Waajibaadka uu madaxweynaha sheegay waa kuwa ay qabtaan dowladaha hoose.
Faragalinta siyaasadda arrimaha dibadda
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku celiyay qodob ay horey dowladda uga hadashay oo ahayd in siyaasadda arrimaha dibedda ay u madaxbanaantahay dowladda dhexe.
"Maamul goboleed hadduu yiraahdo waxaan leeyahay siyaasad arrimo-dibadeed oo gaar ah, oo uu dhaho waxaan rabaa inaan socodka badiyo, oo meelo badan tago, markaas su'aasha meesha taalla waxay tahay; 'haddii aad la fariisato madaxweyne Salva Kiir, adiga iyo Salva Kiir maxaa idinka dhexeeya?', ileen waxaa tahay dowlad goboleed oo dowladdii dhexe ma tihide" ayuu yiri Farmaajo.
Balse maamul goboleedyada oo cuskanaya qodob dastuurka ka mid ah ayaa si joogto ah ula macaamila dowladdaha dariska iyo kuwa kaleba, waxayna aragtidooda ka dhiibtaan sida loo maamulayo siyaasadda arrimaha dibedda.
Markii dowladda federaalka ay moowqif dhexdhexaad ah ka istaagtay khilaafkii dalalka Khaliijka, maamul goboleedyada waxa ay intooda badan la safteen dowladda Imaaraatka iyo Sucuudiga, waxayna safaro ku tageen Dubai.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kale ka eegayay fara galinta siyaasaddda ayaa ka dhawaajiyay iney keeneyso sumcad darro.
"Haddii aad soo raadsato madaxweyneyaasha ama ra'iisul wasaareyaasha waddamada gobolka nala dagan, taasi macneheedu waxay tahay inaad muujineysid inuu dalkaaga kala daadsanyahay oo ay fowdo ka jirto, maxaa yeelay aniga maamul goboleed kale iima imaanayo".
Lama oga waxa uu hadalkani ka tari doono wada xaajoodka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo, kaas oo ay weli ka biyo diidsanyihiin madaxda dowlad goboleedyadda.
Hase yeeshee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiye ka tirsan xisbiyadda siyaasadda ayaa madaxweynaha ku dhalliilay in uu abuurayo sii kala fogaansho
"Haddii aad marqaati ka tahay heshiis nin (Salva Kiir) labo sano ka hor sidaan oo kale buur fuulay; laakiin waaqaca uu ku qasbay in uu dhulka u soo dego oo ninkii (Riek Machar ) ay is hayeen la heshiiyo." Ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.